Maxaa loogala hadlayaa gabadha: talooyinka iyo tabaha ugu fiican | Ragga Stylish
Maxaa loogala hadlayaa gabadha
Jarmal Portillo | | Lamaanaha iyo Galmada
Xaqiiqdii waxay waligeed dhacday inaad shukaansi shukaansi la yeelatay gabar oo aadan sifiican u aqoon sida loo wajaho wadahadalka. Ka fogaanshaha aamusnaanta xun waxay fure u noqon kartaa taariikh wanaagsan iyo aragti wanaagsan. Sidaa darteed, haddii aadan aqoon maxaa gabar loogala hadlayaaWaa inaad ogaataa inay jiraan arrimo gaar ah oo si fiican lagula taliyo inaad wax ka qabato, in kasta oo ay lagama maarmaan tahay in gebi ahaanba la rogrogmo maaddaama dumarka oo dhami isku mid ahayn oo waa inaad ka heshaa meel ay ka wada siman yihiin labadaba.
Sidaa darteed, waxaan qormadan u hibeyn doonnaa si aan kuugu sheegno waxa aad gabadha kala hadlayso si ay taariikhdu si hagaagsan ugu dhacdo.
1 Maxaa loogala hadlayaa gabadha
1.1 Safarada iyo damaca
1.2 Weydii waxqabadkooda
1.3 Waxa looga hadlayo gabadha: xayawaanka guryaha laga cuno iyo cuntada ugu jecel
1.4 Su'aalo halis ah
Shukaansi qof markii ugu horeysay noqon kartaa mid aad u culus. Waxa kuu sii dheer rajooyinkaaga, cadaadiska ah inuu ku jeclaado oo xiriir wanaagsan sameeyo waa mid aad u weyn. Dhammaan walwalkaas ayaa sameyn doona kulanku sifiican ugama uusan qabsoomin, maxaa yeelay qofku ma heli karo waddo uu ku muujiyo naftiisa ama muujiyo xiisaha dhinaca kale. Xaaladahan aan fiicnayn waxay ku dambeeyaan inay baabi'iyaan fursadda aad ku ogaan karto naftaada. Aan aragno waa maxay mowduucyada ugu waaweyn ee gabadhu ka hadli karto guud ahaan.
Safarada iyo damaca
Haddii aadan aqoon waxa looga hadlayo gabadha, ku dhowaad qof walba wuxuu jecel yahay inuu safro. Waa mid ka mid ah waaya-aragnimada adduunka ugu wanaagsan waxayna wax badan ka caawin kartaa barashada qofka. SQofku haduusan jeclayn inuu safro, wax badan baa laga sheegi karaa danahiisa, himilooyinkiisa iyo saadaashiisa nololeed. Si kastaba ha noqotee, waxa ugu caansan ayaa ah haddii aad wax iga weydiiso safarrada ay soo mareen khibradooda oo ay raadiyaan sheeko-wadaagyo guud.
Rabitaanku wuxuu muhiim u yahay barashada qofka. Waa inaad heshaa macluumaad ama heer shaqsiyeed oo intaa ka sii badan markay sheekadu socoto. Sidan oo kale, waxaad ku baran doontaa waxa dareenka ugu xoogani yahay iyo haddii aad tahay qof go’aan leh oo xamaasad badan. Tan waxaad ku ogaan kartaa haddii dantoodu ku habboon tahay taada. Inaad la kulanto gabar muhiim maahan inaad dano gaar ah ka dhexeyso, laakiin waa muhiim inay kula jaan qaadaan taada.
Muuqaal kale oo aasaasi ah oo muhiim u ah taariikhda ayaa la weydiinayaa halka aad ku nooshahay. Waxay noqon kartaa inaad ku cusub tahay magaalada, ama aad isku xaafad ku noolayd sannado badan. Tani waxay gacan ka geysan kartaa aasaasida wadahadal ku saabsan dhadhanka iyo danaha xagga dhaqanka, isbarashada, asxaabta, caadooyinka ama caadooyinka shaqsiyadeed oo badan. Haddii aad taqaanid sida wanaagsan ee loola macaamilayo wadahadalka, way baran karaan oo arki karaan haddii dhadhankoodu u eg yahay kanaga. Sidan ayaad ku heli kartaa fikrado aad ku qaadato iyada oo ku socota taariikh labaad oo kuu oggolaanaysa inaad wax badan ka ogaato arrimaheeda gudaha.
Haddii aadan aqoon waxa aad kala hadasho gabadha, weydiinta waxqabadkeeda iyo qaabka ay u abaabusho nolol maalmeedkeeda iyo nolol maalmeedkeeda waxay noqon kartaa mid xiiso leh inaad wax badan ka barato iyada oo aad muujiso inaad xiisaynayso. Waxaad u sheegi kartaa waxay ku lumiyaan waqtigooda. Waxa kale oo aad ka ogaan kartaa shaqadaada dhammaan danahaaga iyo raaxeysiga toosinta tamartaada iyo masuuliyadaha kaa saaran nolol maalmeedkaaga. Hadalkan waxaad ku ogaan kartaa inuu yahay iyo in kale haweeney firfircoon ama dhaqdhaqaaq badan, haddii ay leedahay nashaadaad dheeri ah sida nooc ka mid ah hiwaayadda ama cayaaraha oo ay waqtigeeda u hureyso. Haddii asxaabteeda ama qoyskeeda ay muhiim u yihiin iyada ama haddii ay u heellan tahay arrin.
Dhinac kale oo ah barashada waxa gabadha loogala hadlayo waa weydiinta waqtigeeda firaaqada iyo dhamaadka usbuuca. Dadka badankood waxay shaqada ka fasaxaan dhamaadka usbuuca waana marka ay helaan waqtiga firaaqada. Haddii aad weydiiso su'aalo inta badan uu weydiiyo maalmaha fasaxa ah, waxaad ka heli kartaa fikrad ku saabsan xiisaha iyo dhadhanka waxaadna ogaan kartaa inay kula jaan qaadi karaan kuwaaga inta lagu jiro xilliyada nasashada.
Marka qofku qasab ku ahayn shaqeynta badanaa waxay u hurtaa waqtigaaga iyo tamartaada waxyaalaha sida dhabta ah kuu xiiseeya. Sidaa darteed, waad ogaan kartaa shakhsiyadda si ka baxsan jadwalka joogtada ah iyo qaafiyadda maalinlaha ah.
Waxa looga hadlayo gabadha: xayawaanka guryaha laga cuno iyo cuntada ugu jecel
Iyagu waa laba mowduuc oo wadahadal ah oo u soo baxa si ku-qasab ah. Inta badan dadka badankood waxay jecel yihiin xayawaanka waana mowduuc abuuri kara xiriir weyn oo labadiinaba ah. Xayawaanku badanaa waxay kiciyaan dareenka ugu fiican ee qofka. Wadahadalkan ka dib su'aasha ku saabsan xayawaanka ay jeceshahay ayaa laga yaabaa inay umuuqato, si loo ogaado haddii xayawaanku muhiim u yahay iyada iyo in la isweydaarsado haddii aad adigu leedahay ama aad jeceshahay xayawaanka raba. Waxay sidoo kale kuu ogolaaneysaa inaad ogaato qayb ka mid ah noloshooda saaxiibtinimo oo aad ogaato inay ku habboon tahay dhadhankaaga.
Dhanka kale waxaan haynaa su'aasha ku saabsan cuntada ugu jecel. Haddii aad weydiiso waxa ay jecel yihiin cuntada ay tahay, waxaad ka hadlaysaa qof waalan oo bixin kara ciyaar badan waana xiiso leh in wax badan laga ogaado. Oo waxaa jira cilmi ka dambeeya su'aashan. Waxaa jira daraasado qaar oo ay sameeyeen khabiirada cilmu-nafsiga oo muujiyey in dadka doorbida cunnooyinka qadhaadh sida kookaha aan macaaneynin iyo shucaaca laga yaabo inay yeeshaan xoogaa dabeecad colaadeed iyo fikrado. In kasta oo tan loo qaadan karin xad-dhaafka ah, way ku habboon tahay in maanka lagu hayo.
Su'aalo halis ah
Kahor intaadan u gudbin su'aalaha halista ah, waxaa muhiim ah inaad ogaato waxaad sameyneyso. Ogaanshaha shaqadooda waxaad yeelan kartaa calaamado cad oo ku saabsan sida noloshooda tahay. Waad garan kartaa deegaanka uu u guuro, fikrad ku saabsan dabeecaddiisa, dadka ku nool deegaankiisa, iwm. Hadaad i waydiiso inuu jecelyahay shaqadiisa ama shaqada uu waligii ku taamayay, waxaad ku ogaan doontaa hamigiisa, hamigiisa iyo dhalanteedkiisa.
Sida su'aalaha halista ah, waxaad weydiin kartaa inta lammaane ee ay horay u lahayd ama kuwa noolaa ee la xiriira mowduucyada qaar ee muranka dhaliyay. Sidan oo kale, waxaad ku abuuri kartaa dood xiiso leh oo ka tagaysa aaggaaga raaxada waxayna kuu oggolaaneysaa inaad ku ogaato wixii ka baxsan su'aalaha dusha ka ah. Marka waxaad arki kartaa aragti daacadnimo ka badan sida uu u yahay.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad kubarandoonto waxyaabo badan oo ku saabsan waxa looga hadlayo gabadha si taariikhdu sifiican ugu socoto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Maxaa loogala hadlayaa gabadha
Suudka arooska cad